EX - ABSDF: ရုရှား စစ်ဆင်ရေး ထိန်းချုပ်ရေး စင်တာ EX - ABSDF
ရုရှား စစ်ဆင်ရေး ထိန်းချုပ်ရေး စင်တာ Yoyarlay ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့မှာ တည်ရှိတဲ့ ရုရှားစစ်တပ်ရဲက စစ်ဆင်ရေးထိန်းချုပ်မှု စင်တာ (War Room) မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုရှားသမ္မတ
ပူတင် ကိုယ်တိုင် စစ်ဆင်ရေးကို စောင့်ကြည့် ကွပ်ကဲ ပါတယ်။ စင်တာဟာ သုံးလွှာ
ပါဝင်ပြီး ပူတင်ဟာ ပထမထပ်မှာ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နဲ့ ကြီး၊ ရေ၊ လေ အသီးသီးက ဦးစီးချုပ်များနဲ့အတူ ထိုင်လို့ ညွန်ကြားပါတယ်။ ယင်း နည်းပညာနဲ့ စစ်ဆင်ရးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုကို ရုရှား အစိုးရပိုင် မီဒီယာ တစ်ခုမှ ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်လွှားက နိုင်ငံများ အနေနဲ့ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ အဆင့်မြင့်တဲ့ စစ်နည်းပညာနဲ့ အင်အားကို သိသာထင်ရှား သိမြင်စေခဲ့ ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် အနေနဲ့ကလည်း ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ စစ်အင်အားကြီးမားမှုကို ပြသချင်တဲ့ သဘောလည်း သက်ရောက်ပါတယ်။ ရုရှား ခရီးသည်
၂၀၀ ကျော်ပါဝင်တဲ့ လေယာဉ်တစ်စီး အီဂျစ်ကို ဖြတ်သန်း ပျံစဉ် အဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက် စစ်ဆင်ရေးကို စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ကနေစလို့ ဆီးရီးယားမှ အစွန်းရောက် သူပုန်များကို တိုက်ခိုက်ရန် အတွက် သမ္မတ ပူတင်ကိုယ်တိုင် စင်တာထဲမှာ ထိုင်လို့ စောင့်ကြည့် ကွပ်ကဲ ပါတယ်။ ဖန်သားပြင်ကြီးပေါ်မှာ တိုက်ရိုက် ဗီဒီိယိုများ၊ အသံများ လွင့်ထားပြီး နိုင်ငံတကာ စစ်သေနာပတိများနဲ့ စကားပြောဆိုမှုများ၊ ဆက်သွယ်မှုများကိုလည်း တိုက်ရိုက် ဗီဒီယိုလွင့်ထားပါတယ်။ ထိန်းချုပ်စင်တာထဲမှာ မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ် ထိန်းချုပ်သူများ၊ ရေငုပ်သင်္ဘော၊ စစ်သင်္ဘောနဲ့ လေကြောင်း ယာဉ်များ နဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့ သတင်းစောင့်ကြည့်သူများလည်း
ပါဝင်ပါတယ်။ . Ref: dailymail အောင်ခမ်း (ရိုးရာလေး) ‪#‎aungkham_yyl‬ ‪#‎news_yyl‬ www.yoyarlay.com
ရုရှား စဈဆငျရေး ထိနျးခြုပျရေး စငျတာ ရုရှားနိုငျငံ မျောစကိုမွို့မှာ တညျရှိတဲ့ ရုရှားစဈတပျရဲက စဈဆငျရေးထိနျးခြုပျမှု စငျတာ (War Room) မှာ ဖွဈပါတယျ။ ရုရှားသမ်မတ ပူတငျ
ကိုယျတိုငျ စဈဆငျရေးကို စောငျ့ကွညျ့ ကှပျကဲ ပါတယျ။ စငျတာဟာ သုံးလှာ ပါဝငျပွီး ပူတငျဟာ ပထမထပျမှာ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျနဲ့ ကွီး၊ ရေ၊ လေ အသီးသီးက ဦးစီးခြုပျမြားနဲ့အတူ ထိုငျလို့ ညှနျကွားပါတယျ။ ယငျး နညျးပညာနဲ့ စဈဆငျရးလုပျငနျး ဆောငျရှကျနမှေုကို ရုရှား အစိုးရပိုငျ မီဒီယာ တဈခုမှ ထုတျဖျောပွသလိုကျခွငျး ဖွဈပွီး ကမ်ဘာတဈလှားက နိုငျငံမြား အနနေဲ့
ရုရှားနျိုငျငံရဲ့ အဆငျ့မွငျ့တဲ့ စဈနညျးပညာနဲ့ အငျအားကို သိသာထငျရှား သိမွငျစခေဲ့ ပါတယျ။ ရညျရှယျခကျြ အနနေဲ့ကလညျး ရုရှားနိုငျငံရဲ့ စဈအငျအားကွီးမားမှုကို ပွသခငျြတဲ့ သဘောလညျး သကျရောကျပါတယျ။ ရုရှား ခရီးသညျ
၂၀၀ ကြျောပါဝငျတဲ့ လယောဉျတဈစီး အီဂဈြကို ဖွတျသနျး ပြံစဉျ အဖကျြဆီးခံခဲ့ရပွီးနောကျ စဈဆငျရေးကို စတငျခဲ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။ စကျတငျဘာလ ၃၀ ရကျနကေ့နစေလို့ ဆီးရီးယားမှ အစှနျးရောကျ သူပုနျမြားကို တိုကျခိုကျရနျ အတှကျ သမ်မတ ပူတငျကိုယျတိုငျ စငျတာထဲမှာ ထိုငျလို့ စောငျ့ကွညျ့ ကှပျကဲ ပါတယျ။ ဖနျသားပွငျကွီးပျေါမှာ တိုကျရိုကျ ဗီဒိယိုမြား၊ အသံမြား လှငျ့ထားပွီး နိုငျငံတကာ စဈသနောပတိမြားနဲ့ စကားပွောဆိုမှုမြား၊ ဆကျသှယျမှုမြားကိုလညျး တိုကျရိုကျ ဗီဒီယိုလှငျ့ထားပါတယျ။ ထိနျးခြုပျစငျတာထဲမှာ မောငျးသူမဲ့ လယောဉျ ထိနျးခြုပျသူမြား၊ ရငေုပျသင်ျဘော၊
စဈသင်ျဘောနဲ့ လကွေောငျး ယာဉျမြား နဲ့ ဆကျသှယျတဲ့ သတငျးစောငျ့ကွညျ့သူမြားလညျး ပါဝငျပါတယျ။ . Ref: dailymail အောငျခမျး (ရိုးရာလေး)